ကချင်အနွယ်ဝင်ဖြစ်သည့်၊ ရဝမ်တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပတ်သက်သည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ ထုံးစံများကို သိရှိဖို့ရန်အတွက် ပူတာအိုမြို့နယ်ရှိ၊ လေယာဉ်ကွင်းရွာကို၊ ကွင်းဆင်းသုတေသနပြုပြီး လေ့ လာခဲ့ပါသည်။ လေယာဉ်ကွင်းရွာတွင် ရဝမ်တိုင်းရင်းသား၊ အများအပြားနေထိုင်ကြပါသည်။ လေယာဉ် ကွင်းရွာ၌ ကွင်းဆင်းသုတေသနပြုသောအခါ၊ မနုဿဗေဒရှုဒေါင့်မှ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ပါသည်။ ရှေးရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံနှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာတွင် တစ်ချို့ကိစ္စ၌ စကားပြန်ကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ရပါသည်။ ရှေးဓလေ့ထုံးစံနှင့် ယခုခေတ်သစ်ဓလေ့ထုံးစံတို့၏ ကွာခြားချက်များကိုလည်း သိရှိရပါသည်။ လေယာဉ် ကွင်းရွာတွင်နေထိုင်ကြသော၊ ရဝမ်တိုင်းရင်းသားတို့၏ လူမှုရေးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ဓလေ့၊ ထုံးစံ များကိုလေ့လာရာတွင် ရဝမ်တိုင်းရင်းသားတို့၏ ရှေးဓလေ့ထုံးစံများကို အခြားတိုင်းရင်းသားများ သိရှိနား လည်စေရန်နှင့် တစ်ဉီး၏ယဉ်ကျေးမှုကို တစ်ဉီးက သိရှိနားလည်သဘောပေါက်ပြီး တိုင်းရင်းသားအချင်း ချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိစေရန် စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သုတေသနပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (She went to Layinguin village, Putao Township to describe the culture and tradition correlated their social organization of Rawan ethnic group,asubgroup of Kachin ethnic group. Most Rawan ethnic group lives in this village. When she collected the data and interview, she got the help of translator to understand their tradition and customs. She can compare the differences between their old and new tradition and customs. The aims of this research (Social Organization of Rawan National) are their culture and tradition to be understood by other ethnic groups and constructed the national solidarity among them